I-Apple ilungiselela ukuvulwa kweVenkile yokuqala ye-Apple eDubai | Ndisuka mac
I-Apple iyaqhubeka nokwandisa ubukho bayo kuwo onke amazwe akhoyo ngoku, kodwa ikwanjalo ivula iiVenkile ezintsha zeApple kumazwe apho ukuza kuthi ga ngoku ibingenayo ivenkile yayo. Kwamanye amazwe afana ne-India, ngaphezulu kwesingxaki esinye kuye kwafunyanwa ngabasemagunyeni belizwe abafuna utyalomali kumaziko e-R & D ukuze bahlangabezane noxanduva olusisiseko lukarhulumente: lokuba ubuncinci i-30% yeemveliso ilizwe. Nangona kunjalo, amanye amazwe akakhange abeke naziphi na iimfuno kule meko, njengoko kunjalo kwi-United Arab Emirates. Kwaye ukuzama ukubonga, iApple yabelane ngenxalenye yomhombiso eza kuboniswa yiVenkile elandelayo yeApple, umhombiso wangaphambili owenziwe ngamagcisa asekhaya.
Ngelo xesha Asazi ukuba kuvulwa nini le venkile intshaNangona kunjalo, abafana beApple sele begqume yonke le facade yemigangatho yomibini ngepeyinti enkulu yegcisa lasekhaya. Eli ziko litsha liza kuvulwa e-Dubai Mall, eyona mall inkulu e-United Arab Emirates, ngokungena kwabantu abangaphezulu kwezigidi ezingama-90 ngonyaka.
I-Apple kancinci kancinci isondela kwiVenkile ye-Apple eyi-500 yayo, iivenkile ezisasazwe phantse kuwo wonke umhlaba, nangona enye yezona ndawo zingakhathalelwanga yiLatin America, apho kuphela iMexico neBrazil zineevenkile zazo zeApple. Kwamanye amazwe, abasebenzisi bayanyanzelwa ukuba babhenele kubathengisi abo bagunyazisiweyo. Ilizwe elilandelayo ukuba ngokwamahemuhemu amva nje aza kufumana iVenkile yeApple iya kuba yiArgentina, apho i-iPhone 7 isandula ukuthengiswa, nangona iphindwe kabini ngexabiso elifumanekayo eMelika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ilungiselela ukuvulwa kweVenkile yokuqala ye-Apple eDubai
I-8 × 29 IPodcast: Ixesha likaMac selifikile